Fahasamihafana eo amin'ny LG Revoltion sy HTC Droid Incredible 2 | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny LG Revoltion sy HTC Droid Incredible 2 | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Technology / Electronics / Smart Phones / Fahasamihafana eo amin'ny LG Revoltion sy HTC Droid Incredible 2
Fahasamihafana eo amin'ny LG Revoltion sy HTC Droid Incredible 2
26 Mey 2011 Narotsak'i Olivia
LG Revoltion vs HTC Droid Incredible 2 - Fomba feno raha ampitahaina
LG Revolution no telefaona 4G fahatelo an'ny Verizon's 4G-LTE Network. Revolution dia telefaona 4G voalohany an'ny LG izay nambara tamin'ny volana Janoary lasa teo tao amin'ny CES 2011 any Las Vegas. Ny Revolution dia mampiseho fampisehoana 4.3 ″ TFT, mpikirakira Snapdragon 1GHz, fahatsiarovana anatiny 16GB, fakan-tsary 5 MP ary ampiasain'ny Android 2.2 (Froyo) miaraka amin'ny UI an'ny LG. Izy io dia mitondra $ 250 miaraka amin'ny fifanarahana 2 taona vaovao. Droid Incredible 2 no telefaona andiany Droid voalohany an'ny HTC ho an'ny tamba-jotra CDMA an'i Verizon. Izy io dia mampiseho fampisehoana LCD Super 4 ″, mpanamboatra Snapdragon taranaka 1GHz manaraka, fakantsary 8MP, fahatsiarovana 16GB ary mitondra $ 200 miaraka amin'ny fifanarahana 2 taona vaovao. Na ny LG Revoltion na ny Droid Incredible 2 avy amin'ny HTC dia samy nampiasa OS iray ihany, Android 2.2 (Froyo) miaraka amin'ny hoditr'izy ireo manokana; Ny revolisiona dia mampiasa LG UI ary Droid Incredible 2 dia manana HTC Sense ho an'ny UI. Ka inona ny Revolisiona manolotra ny mpampiasa amin'ny dolara fanampiny izay aloany? Manolotra seho lehibe kokoa ny 4.3 Revolution (4.3 ″) - saingy tsy Super LCD toa ilay ampiasaina amin'ny Droid Incredible 2, fifandraisana Bluetooth haingana kokoa tohanan'ny v3.0, ny fiainana bateria somary tsara kokoa sy ny mifanentana amin'ny tamba-jotra 4G. Raha ny Droid Incredible 2 dia telefaona 3G CDMA ny Revolution an'ny LG dia telefaona 4G. Na dia tsy manan-javatra hatolotra firy aza ny Revolution, dia afaka mifaly ianao fa manana telefaona afaka mandeha amin'ny tambajotran-taranaka ho avy. Na izany aza, Droid Incredible 2 na tsy 4G mifanentana aza dia manana ny fiasa manerantany.
Verizon dia nilaza fa ny tamba-jotra 4G dia 10 heny haingana noho ny tamba-jotra 3G. Na izany aza LTE amin'izao fotoana izao dia afaka manolotra hafainganana fampidinana 5 - 12 Mbps. Revolisiona dia afaka mizara ny fifandraisany 4G amin'ireo fitaovana Wi-Fi hafa miampy 8 amin'ny alàlan'ny toerany toy ny hotspot finday.
LG Revolution (VS910) no finday avo lenta voalohany avy amin'ny trano LG miasa amin'ny tambajotra 4G-LTE an'i Verizon. Izy io dia manana efijery TFT 4.3 ", processeur 1GHz misy fakan-tsary miatrika anoloana hamela anao hiresaka video. Ny fakantsary lehibe ao aoriana dia manana sensor 5 megapixel miaraka amina endri-javatra toy ny autofocus, camcorder HD ary flash LED. Ny telefaona dia mihazakazaka Android 2.2 miaraka amin'ny hoditra fanao an'ny LG; LG UI. Ny platform Android dia nampiditra mpilalao flash ho an'ny traikefa fitetezana tsy misy tomika. Izy io dia afaka mihetsika toy ny hotspot finday ary mizara ny fifandraisany 4G amin'ireo fitaovana Wi-Fi afaka 8 hafa.
Ny finday dia manana refy 128x67x13.2mm ary milanja 172g. Ny fampisehoana TFT ampiasaina ao amin'ilay fitaovana dia manome vahaolana 480 × 800 teboka izay somary mamiratra sy mazava, saingy tsy dia manaitra loatra raha ampitahaina amin'ny sasany amin'ireo fampisehoana farany. Ny Revolisiona dia manana ny fampiasa rehetra amin'ny finday avo lenta toy ny sensor akaiky, sensor gyro, jack audio 3.5 mm eo an-tampony sy ny accelerometer.
Ny telefaona dia manana fahatsiarovana anaty lehibe 16 GB, ampy ho an'ireo izay tehirizina hitazona rakitra haino aman-jery mavesatra. Na io aza dia azo hitarina ho 32 GB amin'ny fampiasana karatra micro SD. Misy fakan-tsary roa miaraka amin'ny 5 Mp ao aoriana, fifantohana fiara miaraka amin'ny flash LED, afaka manoratra horonantsary HD amin'ny 720p. Ny telefaona dia Wi-Fi802.11b / g / n, DLNA, HDMI, finday (mampifandray hatramin'ny fitaovana 8), GPS miaraka amin'ny A-GPS, Bluetooth v3.0 miaraka amin'ny A2DP + EDR.
Revolisiona miaraka amin'ny NetFlix ny Revolution, ary ny endri-javatra SmartShare dia mamela ny mpampiasa hizara haino aman-jery amin'ny namana mampiasa DLNA. Ny revolisiona dia feno bateria 1500mAh izay manome fotoana firesahana mendrika 7 ora sy 15 min.
HTC Droid Incredible 2 (US version of Incredible S) dia manana processeur 1GHz Qualcomm MSM8655 1GHz manaraka (ilay processeur mitovy amin'ny HTC ThunderBolt), WVGA 4 santimetatra (800 x 480 teboka) fampisehoana LCD fatratra, 768MB RAM, fahatsiarovana anatiny 16GB, Fakan-tsary 8MP ao aoriana miaraka amina flash Xenon roa izay afaka maka horonantsary HD amin'ny 720p, fakan-tsary 1.3MP eo aloha ho an'ny resaka video. Ny fampisehoana LCD tena mazava dia mazava ary mamokatra loko mazava, tsara kokoa noho ny fampisehoana ny Incredible teo aloha. Amin'ny lafiny famolavolana dia mitovy amin'ny HTC Incredible S izy io, tsy misy bokotra ara-batana eo aloha. Ny bokotra eo amin'ny efijery dia mihodina rehefa miova amin'ny fizahana.
Ho an'ny fifandraisana dia manana Wi-Fi 802.11b / g / n, Bluetooth v2.1 miaraka amin'ny FTP / OPP ho an'ny famindrana rakitra ary seranana microUSB misy eo amin'ny sisiny ankavia. Ny endri-javatra hafa dia misy ny tontolon'ny feo manodidina amin'ny alàlan'ny SRS WOW HD, Bluetooth A2DP ho an'ny headset stereo tsy misy tariby, DLNA, GPS misy sarintany efa voarindra ary boaty mitambatra ho an'ny kaonty mailaka rehetra.
Ny telefaona dia mihazakazaka Android 2.2.1 miaraka amin'ny HTC Sense, saingy ny rafitra miasa dia azo havaozina amin'ny Android 2.3 (Gingerbread). HTC Sense dia manolotra homescreens 7 azo namboarina. Finday manerantany miaraka amin'ny fahafahany mivezivezy eran'izao tontolo izao izy io, amin'izay ianao afaka mitondra an'ity telefaona ity rehefa mivoaka ivelan'i Etazonia ianao.
HTC Droid Incredible 2 dia fanampiana hafa amin'ny andiany Droid an'ny Verizon ary navoaka tamin'ny volana aprily 2011 niaraka tamin'ny vidiny $ 200 miaraka amin'ny fifanarahana 2 taona vaovao ary ilaina koa ny drafitra data ho an'ireo rindranasa miorina amin'ny tranokala. Ny drafitra angon-drakitra dia manomboka amin'ny fidirana $ 20 isam-bolana (vola 2GB).
Fampitahana ny LG Revoltion vs HTC Droid Incredible 2
• Droid Incredible 2 avy amin'ny HTC dia telefaona 3G -CDMA raha ny Revolution kosa mifandray amin'ny tamba-jotra 4G-LTE maherin'ny Verizon.
• Droid Incredible 2 dia manana fampisehoana tsara kokoa na dia kely aza ny habeny (4 ″ super LCD) raha oharina amin'ny an'ny Revolution (4.3 ″ TFT)
• Droid Incredible 2 dia manana fakantsary tsara kokoa - 8 MP misy flash Xenon roa raha 5MP misy flash LED ao amin'ny Revolution.
• Ny Revolution dia manohana ny kinova Bluetooth farany (v3.0) fa ny Droid Incredible 2 ihany no manohana v2.1
• Ny revolisiona dia manome fotoana firesahana lava kokoa (7ora 15min) noho ny Droid Incredible 2 (6hr 30min)
• Droid Incredible 2 dia manana RAM 768MB mafy raha 512MB ao amin'ny Revolution.
• Droid Incredible 2 dia manify kokoa (0.48 ″) ary maivana kokoa (4.77oz) noho ny LG's Revolution (0,52 ″ & 6.06oz).
Fahasamihafana eo amin'ny LG Revoltion sy iPhone 4 Fahasamihafana eo amin'ny LG Revolution sy HTC Thunderbolt Fahasamihafana eo amin'ny HTC Sense 4G sy Thunderbolt Fahasamihafana eo amin'ny Samsung Droid Charge sy HTC Droid Incredible 2 Fahasamihafana eo amin'ny HTC Droid Incredible 2 sy Incredible S
Filed Under: Smart Phones Tagged With: 4G LTE , Droid Incredible 2 , HTC Droid Incredible 2 , Incredible S , LG Revolution , LG Revolution , LG Revolution price , LG Revolution release , Revolution , Verizon 4G LTE , Verizon 4G phone , verizon wireless
Momba ny mpanoratra: Olivia
Olivia dia nahazo diplaoma tamin'ny injeniera elektronika miaraka amin'ny tontolon'ny HR, Training & Development ary manana traikefa an-tsaha mihoatra ny 15 taona.
Fahasamihafana eo amin'ny fanahy sy ny fanahy
Fahasamihafana eo amin'ny fikorianan'ny laminera sy ny onjan'ny mikorontana
Fahasamihafana eo amin'ny Pint sy ny Quart ary ny litera
Fahasamihafana eo amin'ny fiteny avo lenta sy amin'ny fiteny haavo ambany
Fahasamihafana eo amin'ny Mey sy ny mety amin'ny fitsipi-pitenenana anglisy